नेपाल आज | वर्षौदेखि क्षतिपूर्ति पाउने पीडित थपिँदै
वर्षौदेखि क्षतिपूर्ति पाउने पीडित थपिँदै
काठमाडाै‌ । हरेक वर्षको भारी वर्षाले देश नै जलमय भइरहेको अवस्था छ । वर्षाको महिनामा महिना भरि नै सर्वसाधारणले दुःख खेप्दै आइरहेका छन् । जताततै हिलामय बाटोले गर्दा गन्तव्यसम्म पुग्न सर्वसाधारण धौधौमा छन् । जताततैको हिलोले गर्दा बाटोघाटो बन्द हुने तथा बाटामै पानी भरिएर खोला बनेको अवस्था छ ।
राजधानीवासीको त यस्तो अवस्था छ भने मधेशतिरको समस्या कस्ले हेर्ने ? मुख्य राजमार्ग हुँदै दैनिक आवतजावत गर्ने यात्रुहरुको पनि दुःखदायी अवस्था छ । मधेशका मध्य र पश्चिमी भू–भागका अधिकांश स्थानमा र पूर्वका केही स्थानहरुमा वर्षाका कारण स्थानिय बासिन्दा भूमिविहिन भएको अवस्था छ ।
वर्षाले गर्दा मशेसमा खान, बस्न कठिन भएको छ । तर अहिलेसम्म सरकारले केहि ठोस उपाय गर्न सकेको छैन । सरकारले दिने क्षतिपूर्ति पाउने आशमा दिनभरी गाउँका बुढापाखाहरू बाटो कुर्दै बसेका छन् । उनीहरूको एउटै प्रश्न छ, किन सरकार मौन ? वर्षाले गर्दा डुबानमा परि मृत्यु हुनेको संख्या बढदो छ ।
दिनहु बिरामीको चाप बढ्ने क्रम जारी नै छ । खाद्यान्न र औषधी ओसारपोसार हुन सकेको छैन् । पहिरोले गर्दा सडकहरू अवरुद्ध छ । यस वर्ष मात्र होइन वर्षौदेखि मधेशका बाढीबाट पीडितहरूले हालसम्म राहत पाउन सकिरहेका छैनन् ।
बारम्बार हुँदै आएको समस्या कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न विभिन्न टेबल तथा बैठकले क्षतिपुर्तिको रकम नसकाइएको भन्न मिल्दैन । यो समस्याबारे प्रतिनिधि सभाको विहिबारको बैठकमा सांसद प्रमोद साहले गएको वर्ष बाढी पीडितहरूले हालसम्म क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको जानकारी समेत गराए ।
सांसद साहले, यस वर्ष पनि मधेशका जिल्लाहरु बाढीबाट डुब्न लागेको र पीडितहरू थपिँदै गइरहेको बताए ।
‘वर्षाले सम्पुर्ण मधेश डुबेर छट्पटिएको अवस्थामा छ । यो वर्षको बाढी पीडितको कुरा गर्दैछौँ । यसअघिको वर्षमा बाढीमा क्षति भएका मधेशीले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् ।’ सांसद साहले भने,‘२०७४/७५ मा बाढी पीडितका लागि गएको बजेट वितरण भएको छैन बताए ।’